स्कुल बन्दका बेला पनि यातायात शुल्क ! - Nepal News - Latest News from Nepal
स्कुल बन्दका बेला पनि यातायात शुल्क !
१ असार, काठमाडौं । भूकम्पपछि एक महिनासम्म सबै शैक्षिक संस्थामा पठनपाठन पूर्ण रूपमा बन्द भए पनि राजधानीका केही निजी विद्यालयले त्यस अवधिको शिक्षण शुल्कसँगै यातायात र अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क पनि असुल्न थालेका छन्।
उनीहरूले बन्दका बेलाको बिल विद्यार्थीमार्फत अभिभावकलाई पठाएका छन्। बन्दका बेला विद्यार्थी स्कुल गएनन् तर बिलमा यातायात र अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क पनि राखेर पठाइएको छ। सामान्य नैतिकतालाई समेत ध्यानमा नराखी विद्यालयले पैसामात्र असुल्न खोजेको भन्दै अभिभावक आक्रोशित रहेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
बानेश्वरस्थित मिल्सबेरी स्कुलले जेठ २४ को मितिमा पठाएको बिलमा वैशाख महिनामा पढाइ नभए पनि यातायात शुल्कका नाममा तीन हजार रुपैयाँ राखिएको छ। मिल्सबेरी महँगो शुल्क लिने स्कुलका रूपमा परिचित छ।
आफैंले कोड भाषामा श्रेणी छुट्याएर यो स्कुलले राखेको ‘बर्ट ए’ कक्षाका विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क १६ हजार आठ सय रुपैयाँ असुलिँदै आएको छ। उक्त स्कुलका एक अभिभावकले भने, ‘पाँच वर्षमुनिका विद्यार्थीबाट एक महिनाको शुल्क १७ हजार असुलिरहेका छन्।
त्यसैमाथि विद्यार्थी एक महिनासम्म स्कुल बन्द भएर घरमा बसे। त्यस अवधिको पनि बस शुल्क जोडेर बिल पठाउने विद्यालय सञ्चालकलाई नैतिकताको पाठ कसले सिकाउला ?’
शान्तिनगरमा रहेको एनके सिंह मेमोरियल इङ्लिस प्रिपेरटरी हाइस्कुलले वैशाखको बिलमा मासिक शुल्कसँगै खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, पुस्तकालय, कम्प्युटरलगायत शीर्षकमा बिल पठाएको छ।
यो बिल जेठ २६ को मितिमा अभिभावकलाई पठाइएको छ। कक्षा पाँचमा पढ्ने छोराको मासिक शुल्कसहितको बिल देखाउँदै एक अभिभावकले भने, ‘विद्यालयका साहुजीलाई पैसामात्र कमाउनुपरेको छ। विपत्का बेला राहत दिनुको सट्टा नानाथरी शुल्क समेटेर बिल पठाइएको छ।’
ललितपुरको डीएभी सुशील केडिया, मणिपाललगायतका स्कुलले पनि विद्यार्थीलाई वैशाख महिनाको मासिक शुल्कसँगै कम्प्युटर, अतिरिक्त क्रियाकलापलगायत शीर्षकमा अभिभावकलाई बिल पठाएका छन्।